Misy antony foana
Rehefa miova tahaka izany ny fomba fifandraisany aminareo dia fantaro fa misy antony foana na inona na inona izany antony izany. Fantaro anefa fa tsy voatery avy aminao foana izany. Ny lehilahy mihitsy no mifantoka tanteraka amin’ny olana sedrainy raha toa ka sendra izany. Mila fotoana irery hakana saina sy handinihina izy amin’izay fotoana izay. Zavatra tsy tokony hatao indrindra ny manome tsiny azy noho izy lasa toa mangina sy heverinao fa tsy miraharaha anao. Tsy tokony hatao koa ny miantso azy foana. Matoa izy te-hihataka dia tsy te ho helingelenina mihitsy.
Tena mihataka maharitra be
Raha efa ho lava kosa ny azy dia tsara ihany hatonina izy ary hanontaniana mihitsy ny heviny mahakasika ny fiarahanareo. Miresaka mifanatrika mihitsy no mety amin’izay fotoana izay mba tsy hisy ny fifandisoan-kevitra.
Aseho azy fa vonona hanohana azy
Raha mandalo fotoan-tsarotra izy ka tsy te-hoelingelenina mihitsy dia hajao ny faniriany. Na izany aza, asehoy azy fa vonona ny hanohana azy ianao na dia hoe : ho sofina mihaino ny olany fotsiny aza. Ataovy fantany fa manan-danja aminao izy. Mety ny manontany azy tsindraindray toy ny hoe : manao ahoana izy. Tsy atao totoafo kosa anefa.
Maka fotoana ho an’ny tena manokana
Marina fa toa mampalahelo ilay hihatahana tahaka izany. Rehefa azonao antoka fa tsy avy aminao ny olana ary tsy misy ahiana ny fiarahanareo dia mijanona ho tony. Mba tsy hifantohanao be loatra amin’ny alahelonao azy dia ifantohy kosa ny fiainanao manokana. Tratraro ny tanjona efa napetrakao ho an’ny fiainanao manokana. Miaraha amin’ny namanao. Manaova fanatajahan-tena ohatra. Tsy mampaninona mihitsy ny miala voly rehefa misy fotoana fa vao maika mampivelatra anao izany.
Mila hery sy ezaka avy amin’ny an-daniny sy ny an-kilany foana ny fiarahan’olon-droa. Misy fotoana mety mba te-hitokana ny olona tsirairay. Tsy midika akory izany fa tsy tia intsony na hoe : hotapahana ny fiarahana. Fotoana hangalana bahana iny ny marina mba hahafahana manome ainga vao ny fiarahana indray. Tsy tokony hikorapaka be foana noho izany raha toa ka mihataka aminao ny olon-tianao.